Ungawukhuphela njani uMculo oMgangatho ophezulu weFLAC Simahla | Iindaba zeGajethi
Ungawukhuphela njani umculo ophezulu weFLAC mahala
Kule mihla kunzima ukuthethelela ukukhuphela umculo kwi-intanethi, ngoku yonke into siyinikwa ngokusasaza ngaphandle kokukhuphela okongeziweyo okanye isidingo sendawo kwizixhobo zethu. Kodwa kuthekani ukuba le nto siyikhangelayo ikowona mgangatho uphezulu? Kulungile ngokusisiseko Akukho sicelo sokusasaza esinokusinika incopho yomgangatho esiwulindeleyo ukuba sifuna ukuvavanya inkqubo yesandi okanye sifuna ukusisebenzisa kwiminyhadala yevolumu ephezulu. Ngokuyinxenye oku kungenxa yokuba umculo wezicelo ezinje ngeSpotify okanye iApple Music icinezelwe ukusebenzisa ibhetri encinci kunye nedatha kunqanaba lethu.
Phakathi kweefomathi ezisetyenziswa kakhulu ukuvavanya izixhobo zesandi okanye iminyhadala yi «FLAC». Ifomathi ngokuqinisekileyo ininzi ayithandwa kakhulu kuneMP3, kodwa iphakamileyo kakhulu kumgangatho wesandi, ukuya kuthi emva kokuba simamele umculo weFLAC, kuya kubonakala ngathi sineendlebe ezimdaka xa simamela iMP3 kwakhona. Apha siza kunika iinkcukacha malunga nomculo weFLAC malunga neendawo onokuzikhuphelela umculo kule fomathi ikhethekileyo.
1 Yintoni umculo weFLAC?
2 Kuphi ukumamela umculo weFLAC
3 Ungawukhuphela njani umculo weFLAC
3.4 I-Redactec. Ch
3.7 Akukho nto
3.8 Phezulu kwiAudio
Yintoni umculo weFLAC?
I-FLAC sisichazi seFree Lossless Audio Codec, i-Codec yeaudiyo eyenza umsindo wedijithali ucinezelwe ngaphandle kwelahleko. Ifayile inokuncitshiswa ukuya kwi-50% yobukhulu bayo ngaphandle kokunciphisa umgangatho wayo konke konke. Nangona isenokungavakali ngathi nguwe, yifomathi esele ikho iminyaka emininzi kwaye yayiyiprojekthi eyenziwe ngumdwelisi ogama linguJosh Colson.
Isiseko seXiph.org kunye neprojekthi yeFLAC yayijongene nokubandakanya le Codec intsha yoxinzelelo, efanayo ephethe ezinye iicompressors ezinje nge-Icecast, iVorbis okanye iTheora phakathi kwabanye. Ngo-Meyi 26, 2013, iLa Luz yabona inguqulelo 1.3.0 yeFlac.
Ukuba sijonge ukugcina nokugcina iifayile zethu zomculo kwifomathi yedijithali, le fomathi ngokuqinisekileyo lolona khetho lufanelekileyo. Eyona nto intle kukuba isimahla kwaye ikhowudi yayo yasimahla, ke inokumiliselwa nakweyiphi na iHardware kunye neSoftware.
Kuphi ukumamela umculo weFLAC
Ukumamela naluphi na uhlobo lwefayile yeaudio ufuna isoftware ehambelanayo, nangona uninzi lwazo kufuneka lukwazi ukuvelisa le Codec. Siza kwenza ukhetho lweenkqubo ukuze ukonwabele ukumamela kakuhle nangaliphi na ixesha.
Umdlali olula nokusebenziseka lula, usebenzisa izixhobo ezimbalwa kwikhompyuter yethu, yamkela zonke iifayile eziviwayo ezifumanekayo kwaye ziyafumaneka. Ibandakanya iiparameter ezininzi zokumisela ngokwezifiso ukuthanda kwethu, ikwabandakanya umhleli wethegi kunye nesiguquli sefayile. Ixhasa izikhululo zikanomathotholo ze-intanethi. Sikwanazo nazo iyafumaneka kwi-iPhone okanye kwi-Android.
Umthuthukisi: UArtem Izmaylov
Eyona ndawo aziwa kakhulu, iVLC ngumthombo wevidiyo evulekileyo kunye nesidlali somsindo kunye nesakhelo. Ihambelana nayo yonke ifomathi yemultimedia. Iyakwazi ukuvelisa kwakhona izinto zecodec ngaphandle kokukhuphela iipakeji ezongezelelweyo. Ikwasinika amandla okudlala iifayile zemultimedia ezigcinwe kwifomathi ebonakalayo, enje nge IiDVD okanye iBluray kwizisombululo ezisusela kwi480 ukuya kwi4K. Iyafumaneka kuzo zombini Mac y Windows ukuba kunjalo iPhone y Android.
Umdlali ovaliweyo ongumthombo okhululekileyo ngokupheleleyo. Ngumdlali ojolise ngakumbi kubasebenzisi abasetyenziselwa ukujija ilayibrari yabo yeaudiyo yedijithali, kuba inenani elikhulu lezinto esinokuphoswa kuzo. Inokuba yeyona ndlela iphambili yeMacOS kwi-iTunes kunye nakwiWindows. Ukuqaqanjelwa ngokungathandabuzekiyo ukwenziwa ngokwezifiso, ikwangomnye wabadlali abakhanyayo esinokufumana simahla. Inenguqulo ye MacOS, Windows kunye neenguqulelo zeselfowuni ze iPhone o Android.
Ukuba unomdla, ungazama iAmazon Music Unlimited iintsuku ezingama-30 simahla ngeengoma ezingaphezu kwezigidi ezingama-70
Ungawukhuphela njani umculo weFLAC
Siza kubona iiwebhsayithi ezinokuthenjwa apho sinokuzikhuphelela umculo wethu kwifomathi yeFLAC, sakuba sikhutshiwe sinokuyonwabela nakowuphi na umdlali okhankanywe apha ngasentla.
Le portal ekwi-Intanethi izinikele ngokucacileyo ekulayisheni umxholo womculo kwifomathi yeFLAC. Inama-discographies amaninzi kuzo zonke iintlobo kunye nee-eras. Kodwa eyona nto intle malunga nale portal yewebhu ngaphandle kwamathandabuzo inyani yokuba nayo izinto ezisemgangathweni zazo zonke izinto ozithandayo, apho unencasa onayo, phantse ngokuqinisekileyo uya kuyifumana into oyifunayo kunye nomgangatho ophezulu. Zonke izinto ezikule webhusayithi zisimahla. Into exatyisiweyo, kuba sonke siyawuthanda umculo omnandi kodwa asinako ukufikelela kuwo ngokuhlawula.
Iwebhusayithi enemvelaphi yaseVietnam, enesona sixhobo sikhulu somculo esiza kusifumana kwi-intanethi kwifomathi yeFLAC. Into ebaluleke kakhulu ngaphandle kwamathandabuzo ukuba yonke imixholo yayo isimahla kwaye ayiqulathanga intengiso elahlekisayo, ke ukukhuphela iialbham zethu esizithandayo kulula kakhulu. Olunye uncedo lwale webhusayithi kukuba ayikusikhawuleli kwifomathi enye, Kodwa isinika ireferensi enkulu yokukhetha phakathi kwayo esinayo: I-MP3, iM4A kunye nefomathi ekumgangatho ophezulu yeFLAC. I-repertoire yekhathalogu yayo inesisa kakhulu kwaye unokufumana umculo kuwo onke amaxesha okanye kwimidlalo bhanyabhanya nakwividiyo.
Umculo weklasiki awunakubakho kolu khetho, lolunye lolona hlobo lufunwa kakhulu kwifomathi yeFLAC. Ngesicelo esifumaneka kwi-Android esibonelela ngekhathalogu enkulu yomculo weklasikhi. Singazuza ii-symphony kunye ne-albhamu epheleleyo ngaphandle kwengxaki. Yonwabela ujongano oluhamba lula kakhulu, kunye nenjini yokukhangela eluncedo kakhulu ekuvumela ukuba uphonononge zonke iinketho kwaye ufumane oko sikukhangelayo. Eli qonga libonelela ngeentsuku ezili-14 zokulinga simahla ukusebenzisa umxholo, emva kweli xesha kuya kufuneka uhlawule ukubhaliswa kwePrimiyamu yonyaka nge- € 140Ingabonakala ibiza kakhulu kodwa ukuba ungumthandi wolu hlobo lomculo, ngokungathandabuzekiyo iya kukufanelekela yonke ipenny etyalomali.
I-Primephonic-Ukusasaza iClassical Music
Enye yeendlela ezilungileyo zabathandi bomculo obalaseleyo. Iqonga labucala elikwi-intanethi elinika ilayibrari enkulu yomculo. Nangona Ayikhawulelwanga emculweni kuphela njengoko siza kuba nokufikelela kwividiyo, iincwadi, isoftware kunye nokuhlekisa. Inqaku elibi lale portal yewebhu ngaphandle kwamathandabuzo ukuba awukwazi ukungena ngokukhululekileyo, kodwa ukuba iyafikelelwa ngesimemo esivela kumsebenzisi. Nangona sinolunye ukhetho olulula kwaye lelo sinako cela udliwanondlebe malunga nezihloko ezinxulumene nomculoUkuba siyoyisa, sinokubhalisela iRedactec kwaye sikhuphele umculo omninzi.
Sifikile ku Olona khetho lulolona lubalaseleyo kwabona ba rocker. Ukusuka kule webhusayithi sinokukhuphela okungapheliyo komxholo womculo kwifomathi yeFLAC yohlobo lwerwala. Iqonga lasimahla ngokupheleleyo kwaye linenani elikhulu lama-albhamu, ii-singles, iikhonsathi kunye nokunye umxholo kwifomathi yeFLAC. Yonke imathiriyeli yakho ikwiiseva ezinjengeMediaFire okanye iMega, ngoko ke ukukhuphela kulula kakhulu. Eyona nto intle malunga nale portal kukuba umxholo ukhululeke ngokupheleleyo, ke sinako ukwandisa ingqokelela yethu ngokungenammiselo kwaye ngaphandle koloyiko lweendleko ezongezelelweyo.
Kule meko yiwebhusayithi yokuhlawula, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo yezona zinto zikhululekileyo kwaye zinomvuzo. Ukongeza ekubeni nako ukufumana umculo kuqokelelo olukhulu, unethuba lokuphonononga zonke iintlobo zohlobo, nokuba yeyiphi na ifomathi esiyifunayo. Ifomathi yeFLAC inobukho obomeleleyo ukuze umgangatho uqinisekiswe. Njengento eyongezelelweyo esingenakufumana kuyo yonke indawo, le webhusayithi isinika ithuba lokusebenzisa umxholo wayo ngaphandle kokufuna ukhuphelo, ukuze simamele umculo ngqo.
Iwebhsayithi esinika enye yezona ndawo zibalaseleyo kwifomathi yeFLAC ye-intanethi yonke yasimahla. Phakathi kwoluhlu lwakho sifumana ngaphezu kwama-20 omculo kunye n repertoire ehlaziywa rhoqo. Ikwayenye yala maphepha athi ibonakaliswa kukufikelela ngokulula, Oko kuthetha ukuba siya kuba nokufikelela ngokupheleleyo mda kwizinto zakho ngaphandle kokuba uhlawule enye €. Ukuqhubeka nokukhuphela nayiphi na i-albhamu, yikhangele nje kwiinjini yokukhangela, uyivule kwaye uye kwikhonkco lokukhuphela.
Enye iwebhusayithi ehlawulelweyo, enethala leencwadi elikhulu eligcwele umculo kuzo zonke iintlobo ezaziwayo. Inika ithuba lokufumana ii-discographies kwifomathi esiyifunayo. Nangona sinomdla kumxholo weFLAC kwaye kule meko ubukho bayo bukhulu kakhulu. Kuba okwangoku yeyona fomathi ithandwayo ngabo bonke abathandi bomculo we-hi-fi. Kule meko sikwafumana inani elikhulu leengoma zomculo weklasikhi kwifomathi yeFLAC. Akukho simahla kodwa ngaphandle kwamathandabuzo kufuneka sitsho ukuba akukho lula ukufumana ivenkile ekwi-intanethi enomculo kule fomathi yahlukile, ekulula ukuyisebenzisa kwaye isebenza ngokugqibeleleyo. Iintlawulo zinokubakho minyaka le okanye inyanga nenyanga, ke sinamancedo xa sihlawula iifizi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ungawukhuphela njani umculo ophezulu weFLAC mahala
Bukela i-GS Pro, iwotshi ye-Honor yeyona "premium"